Vaovao - Torohevitra fanadiovana sy fanamboarana volotsangana
Ny bararata dia karazan'ahitra matanjaka izay mety indrindra amin'ny fanaovana terrasetra mafy sy hazo fisaka. Ny tokotanin'ny volotsangana dia mahatonga ny zaridainao hanana endrika voajanahary sy tsara tarehy. Ny gorodona volotsangana mavesatra any ivelany dia mampiasa fitaovana volotsangana faran'izay tsara, ary vita amin'ny alàlan'ny teknolojia fanodinana henjana. Ny gorodona volotsangana mavesatra dia tsy misy poizina, tsy misy fofona, mafy orina ary miorina amin'ny bibikely. Io no safidy tsara indrindra amin'ny toerana ivelany, toy ny valan-javaboary, fiarahamonina, kianja sns.
Na izany aza, ny gorodona volotsangana any ivelany dia mety ho maloto sy ho feno volondavenona rehefa mandeha ny fotoana. Ny fahadiovana sy ny fikojakojana araka ny tokony ho izy dia zava-dehibe mba hitazomana ny deck ho tsara tarehy araka izay azo atao.
1. Nahoana no zava-dehibe ny fanaovana fikojakojana?
Betsaka ny anton-javatra mety hisy fiantraikany amin'ny tabilao mihintsy, toy ny ravina, ny vovobony, ny fanala, ny orana na ny tara-masoandro maro. Ny toetr'andro isan-karazany amin'ny toerana samihafa dia misy fiantraikany betsaka amin'ny fisehoan'ny tabilao volotsangana. Amin'izany toe-javatra izany dia ho maloto sy halazo loko ny takelaka fanaovana takelaka ary mety hahazo triatra sy triatra. Zava-dehibe tokoa ny fanaovana fikojakojana mba hitazomana ny tokotaninao ho salama tsara.
2. Ahoana no hanaovana ny fikojakojana?
Ny tabila vita amin'ny volotsangana, toy ny fametahana hazo tropikaly dia ilaina ny mitazona azy amin'ny diloilo (toy ny menaka Woca) farafahakeliny indray mandeha isan-taona. Manome soso-kevitra ny REBO fa mila fikolokoloana madio sy mora avy hatrany aorian'ny fametrahana ny tabilao fametahana, satria misy gorodona mandritra ny fametrahana azy.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanovozan-kevitra:
Voalohany indrindra, tokony misafidy fitaovana mety amin'ny fanadiovana ireo tabilao ianao.
1) Diovy ny tabilao fametahana: sasao amin'ny rano na ampiasao mpanadio manokana hanalana ny mucedine sy ny loto avy eo diovina amin'ny borosy.
2) Hamarino tsara fa maina voajanahary ireo tabilao fametahana ary asio menaka miorina amin'ny rano ivelan'ny trano.
3) Arovy ny faritra voatazona mandra-pahazo maina ny menaka voajanahary.
Ity ny loko mifanohitra amin'ny REBO M-series (medium carbonized) sy D-series (deep carbonized)
Ny fikojakojana tsy tapaka ny gorodona hazo vita amin'ny volotsangana eo an-tokotany dia afaka mitazona ny vokatra ankapobeny amin'ny fametrahana gorodona, ary tsy sarotra ny mitazona azy. Ka raha tianao ho tsara tarehy toy ny taloha ny deck anao dia tena ilaina ny fikolokoloana. Asa mora ho anao io, sa tsy izany? Raha mila fanazavana fanampiny, azafady azafady mba mifandraisa aminay.